Runbo P5 4G DMR VHF/UHF – Network Radios
Ikhasi lasekhaya leNethiwekhi yeeRadiyo ezisemthethweni
$0 0 izinto
Ikhaya / IiRadio / Iirediyo zeLifa / VHF/UHF/Multiband / Runbo P5 4G DMR VHF/UHF
IThebhulethi yomgangatho woMkhosi kunye neRTK Positioning amandla adibeneyo e-Forensic Mapping, uLwakhiwo ngokutsha loNxibelelwano, uVavanyo loMhlaba njl.njl.
Isebenzisa i-Android, unokufaka zonke ii-apps ezifumanekayo ze-Play Store. Oku kuthetha ukuba ungafaka iZello, iTeam yeQela, i-EchoLink kunye nabanye abaninzi kwaye usebenzise iqhosha le-PTT elakhelwe ngaphakathi ukuze utshixe ukuhanjiswa kwezo setyenziso. Ngaba unokuyithelekelela loo nto? Ukuba awufikeleli kwindawo ye-EchoLink, sebenzisa nje i-3G, 4G okanye iWiFi, kwaye uqhagamshelwe. Ungaze uphoswe yi-QSO kwakhona ngenxa yokuba akukho siphindaphindo sikufutshane.
Unokutyelela ivenkile Runbo esemthethweni.
iindidi: IiRadiyo zeDMR, IiRadiyo zenethiwekhi, VHF/UHF/Multiband
Ulwakhiwo, ukuhanjiswa, umsebenzi wasendle, amaHlathi, uVavanyo loMhlaba, uNyanzeliso loMthetho, uLungiselelo, ngaphandle, uLawulo lwePropati, uLoliwe, uHlangulo, uRhwebo, uKhuseleko, uThutho, iWarehouse
Mnyama / Isilivere
Isikrini sokuchukumisa umkrwelo esinamandla
IHelio P35 MT6765
64 bit – Octa Core 2.0GHz
Ikhadi le-Micro SD (ikhadi le-T-Flash) ukuya kuthi ga kwi-128GB
I-Accelerometer, i-G-Sensor, i-Geomagnetic, i-Gyroscope, iSensom yokukhanya, ukusondela
Isandi, ukungcangcazela, ukukhanya kwe-LED
Isithethi esakhelwe ngaphakathi 2W
I-Mic eyakhelwe-ngaphakathi yokuCima ingxolo kabini
Uhlobo lwekhamera yangasemva
USB Fast Cahrge
PTT: 4W, DMR + UHF400-470MHz / DMR + VHF136-174MHz / DMR + UHF+VHF Dual Band, POC (PTT Phezu kweSelula)
2.4G/5.0G 802.11 a/b/g/n,
-20 ° C ukuya kwi-60 ° C
-20 ° C ukuya kuma-70 ° C
FCC, ce, RECH, GS, UL, RoHS
1 x Ithebhulethi
1 x I-Antenna
1 x Umxhasi
Yiba ngowokuqala ukuhlola "Runbo P5 4G DMR VHF/UHF" Rhoxisa impendulo
Kufuneka ube loga ukuthumela ingxelo.
Inrico T320 4G / Wifi (ivuliwe i-Android)
Sale! $299 $249 Khetha ukhetho
I-Talkpod N58 3G / WiFi (ivuliwe i-Android)
Sale! $399 $359 Khetha ukhetho
ikaliwe 4.50 ngaphandle 5
$249 Khetha ukhetho
10″ Icwecwe likanomathotholo eliMbini
Ivenkile yebhokisi esemthethweni
Ivenkile yeRunbo esemthethweni Ivenkile ye-RFinder esemthethweni
Ivenkile yeInrico esemthethweni
Naliphi na iTone AT-D878UVII Plus
izinto ezincedisayo (29)
IiRadiyo zeDMR (16)
Iirediyo zeLifa (2)
IiRadiyo zeNethiwekhi eziShukumayo (8)
Iingxowa zeRadiyo yeTactical
IiRadiyo zeNethiwekhi eziShukumayo
Ukuhambelana kwabaqhubi beeselfowuni
Zonke iiradiyo zenethiwekhi zisebenza kunye nabaqhubi be-GSM. E-USA, baya kusebenza kuphela ne-AT & T (3G kunye ne-4G) kunye ne-T-Mobile (3G). Qaphela ukuba i-AT & T iya kuthenga nayiphi na ikhontrakthi onokuba nayo nabanye abasebenzisi, ukuze ukwazi ukutshintsha ngokulula umphathi. Iiradiyo ziya kusebenza ukufikelela kuyo nayiphi na indawo ene-WiFi.
Inqaku kubathengi bam
Ngenye imini bendijonge kwi-Intanethi ukuba kukho nayiphi na indlela yokunciphisa uxinzelelo xa kukho into engahambanga kakuhle nomthengi. Njengephakheji elityazisiweyo okanye umthengisi owenza impazamo wayithumela kwidilesi engeyiyo. Ndifuna ukulala ebusuku kwaye ndikwazi ukulala ndingakhange ndicinge ngoJason olinde iiradiyo zakhe ezi-3 kwaye khange azifumane okwangoku okanye uTomas ofumene i-T298s enesiphene. Ndifuna nje ukushiya iingxaki "zabo" ecaleni kwaye ndonwabe ngexesha lam lasimahla ngaphandle kokucinga ngemicimbi yabo. Emva kwayo yonke into, isonjululwe. Ubhala i-imeyile uxolise, zama ukulungiselela ukuthunyelwa okutsha, ubeke iyunithi apha naphaya, ukhuphe imali encinci kwaye yonke into ihamba kakuhle.
Kodwa ke ndiye ndabona ukuba andifanelanga kuhamba ngaloo ndlela. Kuyingozi enkulu ukuba ndingusomashishini “osomashishini”. Olu luvelwano oluhlala luhleli kunye nabathengi olundichaza njengengcali kunye nomnini weshishini. Kukuthanda kwam lo msebenzi ojika ube ngumdlalo wokuzonwabisa. Ukuba andiziva zintlungu baziva abathengi bam xa kukho into engahambi kakuhle, ishishini lam alisoze liphumelele.
Esi sisombululo sindibonisa ukuba ukuba novelwano kubathengi, ukuhambisa konke ukuthanda kwam kuyo yonke imisebenzi yam yeshishini kuya kwenza ukuba wonke umntu azive eluthando xa enxibelelana neshishini lam.
Ngenxa yoko, ndiyabulela kuni nonke kwaye ndiya kuhlala ndinombulelo ngentembeko!
Ukuba ufumana uvuyo ngoonomathotholo obuthengileyo kunye nam, emva koko wenze usuku lwam!
UBrandmeister kunye ne-TGIF ngaxeshanye ku-Go
I-Boxchip S700A Analog / DMR yoVavanyo lweVidiyo
Mamela kwiNethiwekhi yeeNethiwekhi
Uyenza kanjani inkqubo yokuhamba rhoqo kwee-Boxchip S700A DMR
Uyicwangcisa njani iBoxchip S700A Boxchip yokusebenza kweDMR
Ngubani ofumanekayo kwi-IRN?
Inrico TM-8 Poor Audio Fix -imodeli entsha
Igalelo likaSteve Jobs kwiiRadiyo zenethiwekhi
I-Inrico T298s 3G / Wifi UHF Radio 400-470 MHz (ivuliwe i-Android) i-EU / UK / Australia
I-Inrico T298s 3G / Wifi VHF Radio 137-174 MHz (ivuliwe i-Android) i-EU / UK / Australia
Itshaja yedesktop / iNdebe yeNdebe yokuSusa ye-RT4
U-Ed Koorengevel on Itshaja yedesktop / iNdebe yeNdebe yokuSusa ye-RT4
Tony.mayall1 on I-Senhaix N60 4G / i-WiFi
UAndrew Nagle on Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Inethiwekhi yeRadiyo yeNethiwekhi
Mb60304 on Ithoni yeRadio RT4 4G/LTE WiFi + Imakrofoni ephathwa ngesandla
Ivenkile esemthethweni yeRFinder Ivenkile esemthethweni ye-Inrico
Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kwihlabathi liphela
PTT4U yinkonzo yomnatha wonxibelelwano ngobume beengcali. Ukuthembela kumqondiso we-GSM, oonomathotholo bethu baya kuba nakho ukuthetha bodwa ngaphandle kothintelo loluhlu. Irediyo nganye isebenza ngeSIM khadi (ayifakwanga) kwaye isebenzisa i-GSM / 3G / 4G kwaye ezinye iindlela zisebenza nophawu lweWiFi. Ithetha ukuba awudingi ukuchitha imali eninzi koonomathotholo abiza imali eninzi, abaphindayo, ii-eriyali okanye iindawo eziqeshisayo. Lonke uthungelwano lwe-infra-lwakhiwo lubonelelwa ngumthwali we-GSM. Iminxeba yabucala kunye neqela iyafumaneka. Amalungu eqela lakho anokuba kumazwe ahlukeneyo kwaye abe nokufikelela. Umsebenzisi ngamnye unokujonga indawo akuyo (ngokusekwe kwiprofayile yabo), thumela imiyalezo kunye nezilumkiso ze-SOS. Konke okufuneka ukwenze, kukuthenga iirediyo zethu zenethiwekhi, kuxhomekeke kwiimfuno zakho, faka i-SIM khadi yakho oyiphetheyo kwiiradiyo (isicwangciso sedatha senyanga se-500MB siyakwanela) kwaye Rhuma minyaka le PTT4U inkonzo. Uya kudinga umrhumo wonyaka omnye wama- $ 49 kwiradiyo nganye. Kwaye kunjalo! Azisekho iintloko.
Indlela ye-12759 NE Whitaker, # P888
EPortland, OKANYE 97230
Inombolo yomnxeba: + 1 503 746 8282
Ngo-10 kusasa-5 ebusuku GMT
© 2021 Inethiwekhi-radios.com onke amalungelo agciniwe
KwiDola yaseMelika USD $
Euro I-EUR €
Pound yaseBrithani I-GBP ye- £
Dollar Canadian CAD C $
Dollar yaseAustralia AUD A$